Ururada Haweenka Gobolka Bari oo Dhaliil u jeediyay Wasaarada Haweenka Puntland – SBC
Ururada Haweenka Gobolka Bari oo Dhaliil u jeediyay Wasaarada Haweenka Puntland
Ururada Haweenka Gobolka Bari iyo kan Degmada Boosaaso ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta Gobolka Bari ee Magaalada Boosaaso ayaa waxa ay ku dhaliileen wasaarada Haweenka iyo Arimaha Qoyska Puntland oo ay sheegeen in aysan wax ka qaban gobolkan bari iyo Degmooyinkiisa.
Masuuliyiinta iyo Xubnaha Haweenka gobolka Bari iyo Degmada Boosaaso ayaa kulankooda maanta ku tilmaamay mid ay gebi ahaanba ugu dhaliilayaan wasaarada Haweenka taas oo ay ku tilmaameen in wasaarada ay ka gaabisay Waxqabadka ururada Haweenka gobolka bari iyo kan degmada Boosaaso iyagoona sheegay in wasaaradu ay ku ekeysay waxqabadkooda dhanka wasaarada oo keliya.
Maryan maxamed Xasan Guduudo oo ah Gudoomiyaha ururka Haweenka gobolka Bari oo ugu horeyn ka hadashay waxqabadka Ururkooda ayaa tilmaantay in uu yahay kan ugu wax qabad wanaagsan ururada Haweenka Puntland, balse wasaarada Haweenka ee Puntland aysan ka helin gacantii ay ugaga baahnayeen,
Sidoo kale Maryan Guduudo ayaa ugu baaqday Wasiirka wasarada Haweenka Puntland in ay jawaab ka bixiso tawashada ururada Haweenka gobolka Bari .
Khadro Maxamuud Dhuungale oo ah gudoomiyaha Ururka Haweenka Degmada Boosaaso, ayaa iyana dhankeeda sheegtay in wasaaradu ay isku koobtay shaqooyinkii loo igmaday oo aheyd wax u qabashada iyo la shaqeynta ururada Haweenka gobolka Bari.
Waxayna dhanka kale sheegtay in Markii ay u baahdaan Wacyigelinta Amniga iyo Nadaafada loo sheego in wasaarada ay kaalinteeda gabto,
Ugu dambeyntii dhaliishan wasaarada haweenka loo jeediyay ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xili ururada haweenka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso ay wadaan wacyigelino ku wajahan amniga iyo bilicda Magaalada Boosaaso .